आयातमुखी व्यवसायीको वर्चश्व हुँदा निर्यात क्षेत्रमा समस्या भयो’ हरिबहादुर कार्की, अध्यक्ष -नेपाल निर्यात परिषद्
जनतापाटी बिहिवार, मंसिर ४, २०७७, १०:३४:०० मा प्रकाशित
कोरोना महामारीको कारण नेपालको समग्र निर्यात क्षेत्रले कस्तो असर भोग्नु परेको छ ?
विजोक भयो नी । पहिले पर्यटकहरु आउंथे, उनीहरुले नै हाम्रा समान किनेर लैजांदा पनि हाम्रो निर्यात क्षेत्र निकै हदसम्म धानिएको थियो । त्यसमाथि विदेशी पार्टीहरुले माग गर्दथे र हामीले राम्रै परिमाणमा निर्यात गर्दथ्यौं । तर विश्वव्यापी कोरोना महामारी शुरु भएपछि निर्यात् ठप्पै भयो । हाम्रो मुख्य बजार युरोप अमेरिका हो, तिनीहरुसमेत कोरोना महामारीको चपेटामा परे । त्यहांबाट माग आउनै अवस्था नै रहेन । माग आएर पनि निर्यात गर्ने अवस्था रहेन ।
समग्रमा कति नोक्सानी भए होला, त्यसको कुनै तथ्याङक छ ?
कुनै तथ्याङक छैन । महामारी नरोकिएकोले यकिन तथ्याङक आउने अवस्था पनि छैन । तर, मेरो व्यक्तिगत अनुमानमा लकडाउन शुरु भए यता नेपालको निर्यात क्षेत्रले कम्तिमा ४० प्रतिशत नोक्सानी बेहोरेको छ ।
४० प्रतिशत भनेको आर्थिक रुपमा कति हो ?
करिब ५०, ६० करोड ।
समस्या समाधानको लागि कुनै प्रयास गर्नु भएको छैन ?
हामीले प्रयास गरेर समाधान हुनै कुरा नै होइन यो । हामीले सरकारसंग हार गुहार गर्ने हो । सरकार पनि केही गर्न सकिरहेको छैन ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका नीजि क्षेत्रका छाता संगठनहरुबाट संगठित रुपमा पहल गर्ने हो भने त केही हुन सक्थ्यो होला नी ?
हुंदैन । महासंघ यो वर्ष भरि नै चुनावमा अल्झियो । महासंघका पदाधिकारीहरु चुनावि गतिविधिमा केन्द्रित भए । अरु काम खासै हुन सकेन । यसै पनि महासंघ, सिएनआई, चेम्वर लगायतका जति पनि व्यवसायिक संघ संस्थाहरु छन्, तिनीहरुमा आयातमुखी व्यापारीहरुको बोलवाला छ । उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्ने उद्यमी व्यापारीहरु त्यस्ता संस्थामा ओझेलमा पारिएका छन् । त्यसले गर्दा यी संस्थाहरुले निर्यातजन्य उद्यमहरुलाई महत्व दिन सकेका छैनन् । फलस्वरुप निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिनको लागि नीजि क्षेत्रको आवाज जुन रुपमा उठ्नु पर्ने हो, त्यो रुपमा उठ्न सकेको छैन ।
त्यसको लागि त तपाईहरुले पनि त पहल गर्नु पर्ने हो नी, के पहल गर्नु भयो ?
हामीले सक्दो पहल गरेका छौं । नेतृत्वमा जस्ता व्यक्तिहरु पुगे, उनीहरुले त्यही क्षेत्रको कुरा बढी उठाउंछन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ, सिएनआई, चेम्वर अफ कमर्श जस्ता संस्थाहरुमा आयातमुखी व्यवसायीको वर्चश्व भएकैले आयातका कुरा उठ्छन्, निर्यातजन्य उद्योग र उद्यमीले भोग्नु परेका समस्याहरु कम उठ्छन् । त्यही महसुस गरेर हामीले अहिले निर्यातजन्य उद्यमीहरुलाई महासंघको नेतृत्वमा पुर्याउनको लागि पहल गरिरहेका छौं । म आफै पनि उम्मेद्वार छु । अबको दिनमा महासंघले निर्यात उद्यमीहरु र निर्यात क्षेत्रका समस्याहरुलाई विशेष जोड दिएर समाधानको लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने लागेकोले हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । हेरौं, के हुन्छ ।
‘सी’ डिभिजन लिग फुटबल आजदेखि, विजेतालाई पाँच लाख बुधवार, फाल्गुन २२, २०७५, १०:३१:००
भैरहवामा महिला संघ क्रान्तिकारीको भेला आइतवार, श्रावण १९, २०७६, ०२:०७:००
आइतबार प्रदेश २ मा सार्वजानिक विदा शुक्रवार, कार्तिक २२, २०७६, १७:५१:००
‘यस्तो बेलामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने ? यो त राम्रो भएन’ - ज्योत्सना श्रेष्ठ